मोबाइल र पैसाको लोभमा आफ्नै साथीको हत्या ! « MNTVONLINE.COM
मोबाइल र पैसाको लोभमा आफ्नै साथीको हत्या !
काठमाडौँ । एक सात्ता देखि वेपत्ता रहेका सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका १ जमुनी मधेपुरा निवासी २५ बर्षिय श्रवण मुखिया साथी सँग निस्केको बेला वेपत्ता भएपछि प्रहरीले निरन्तर खोजी जारी राखेको छ । बैदेशिक रोजगारीमा गएका उनी शनिबार घर फर्केका थिए ।
घर पुगेको केही घण्टामै आमा ललितालाई गाउँकै साथी सुरेन्द्र यादवसंग ‘मोटरसाईकल किन्न राजविराज जाँदै छु’ भन्दै उनी हिडेका थिए । राती अबेर सम्म उनी नफर्केपछि परिवारजनले खोजी सुरु गरेका थिए ।
सँगै गएका सुरेन्द्र सँग सोध्दा उनले बिच बाटोमै श्रवण आफनो साथ छोडी हटेल गाउँमा भोज खान जवाफ दिएका थिए । परिवारका सदस्यलाई शंका लागेर गाउँले भेला गरी सोधपुछ गर्दा सुरेन्द्रले श्रवणसंग बाहिरबाट कमाएर ल्याएको पैसा र मोबाइल हत्या गरेको जवाफ दिएपछि प्रहरीलाई उजुरी गरिएको छ ।
प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि सुरेन्द्रले श्रवणलाई डाक्नेश्वरी नगरपालिका ६ मा पर्ने कोशी पश्चिमी नहर र पाँची नदीको दोभानमा हत्या गरी फालेको भन्दै स्थान समेत देखाई दिएका छन् ।
लागू औषधको दुर्व्यसनी र दैनिक मदिरा सेवन गर्ने सुरेन्द्रको भनाईमा आशंका गर्दै भएपनि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । घटनास्थल भनिएको स्थानबाट श्रवणको चप्पल, चाँदीको सिक्री, रुमाल र रगत लतपतिएर सुकेको अवस्थामा एक थान ब्लेड लगायतका सामान भेटेको ईलाका प्रहरी कार्यालय पातोका हवलदार तेज नारायण शाहले जानकारी दिए ।
प्रहरी उपरिक्षक राजेन्द्र धमलाले विगत ३ दिन देखि प्रहरीको गोताखोर सहितको टोलीले कोशी पश्चिमी नहर र पाँची नदीको दोभानमा खोज तलास गरिरेहको तर अहिले सम्म शव नभेटिएको बताएका छन् । शुक्रबार पनि सुनसरीको पकलीबाट प्रहरीको थप गोताखोरको टोली आएर खोज तलास गरिरहेको छ । गोताखोर टोलीले रबर बोर्ट चढेर खोजी सुरु गरेको छ ।
कोरोनाको निः शुल्क उपचार पाउनेहरूको सूची सार्वजनिक, को को परे सूचीमा ?